Inqwebulamehlo ngolwamatayitela ivusa izinhlonze – Ubukhosi
Home/ Ubukhosi noMhlaba/Inqwebulamehlo ngolwamatayitela ivusa izinhlonze
Inqwebulamehlo ngolwamatayitela ivusa izinhlonze
Ubukhosi News August 25, 2016
UDkt uFikisiwe Madlopha weBhodi le-Ingonyama Trust
Owayeyisikhulu ebhange uxwayisa ngokwedluliselwa kwamatayitela kwabasemakhaya
UMBIKO ngodaba lwamatayitela okhishwe elaboHlanga emasontweni adlule selunyakazise obelawula izikweletu (credit controller) uMnu uThembeni Buthelezi ebhange iThala Development Finance Corporation wakhipha isexwayiso esishubile ngengozi elengela izakhamuzi eziningi ezindaweni zasemakhaya. Lokhu kulandela ngemuva kokuthi Ingonyama Trust Board (ITB) ihlongoze ukuba bonke abantu abakhe ezindaweni zasemakhaya ukuba banikezelwe ngamatayitela obunikazi bezindawo.
Uthi lokhu okuhlongozwa i-ITB kungukudlala ngomlilo ebusika ngoba kuzofa abantu ngenxa yale nto. “Futhi lesi sisphakamiso se-ITB sifana nokukhaphela izakhamuzi zasemakhaya emphandwini wamabhubesi, okungabamabhange,” kusho uMnu uButhelezi. Uqhuba uthi: “Baningi abantu abazodliwelwa imizi yabo ngabamabhange. Lokhu ngikusho ngokwamava enginawo njengoba kade ngisebenza khona ebhange i-Thala. Kumanje abamabhange bami ngomumo ukugasela ngenhloso yokuzodla imizi yalabo ababethathe imalimboleko emabhange,”
Uqhuba uthi iningi labantu basemakhaya likweleta ibhange iThala okuyimali ababeyibolekela ukuqhuba amabhizinisi okubalwa nezitolo kanti abanye babefuna ukwakha imizi nokunye kodwa bazithola sebehluleka ukuyibuyisa ngenxa yesimo sezomnotho.
“Iningi lalabo bantu bagcina beshaye utshani nemali yebhange bayozihlalela emakhaya lapho selakhe khona izithabathaba zemizi yezigidi,”
UButhelezi uthi ibhange iThala lagcina liye enkantolo nokuyilapho lathola khona incwadi yomyalelo wenkantolo ukuba lidle izimpahla zalabo abalikweletayo kodwa zafike zayima emthumeni ngoba umhlaba ungoweNgonyama. “Kade abamabhange bezungeza imizi yalaba bantu abalikweletayo ngenhloso yokuyidla kodwa livinjwe ukuthi umhlaba ungoweNgonyama . Manje abamabhange balindele ngabovu ukuba abantu baseMakhaya banikezwe amatayitela bese ligasela lizodla imizi yabo ngenhloso yokubuyisa imali yalo. Sekukaningi abamabhange bezama ukudayisa imizi yabantu kodwa ayidayiseki ngoba isemhlabeni weNgonyama,” kusho uButhelezi.
Uthi okumzwisa umnjunju ukuthi baningi abantu abazolahlekelwa izithabathaba zemizi yabo yezigidi zemali ngenxa nje yezi-R30 000 kuya ezi-R50 000 ayeziboleke eThala wase ehluleka ukuwubuyisela.
“Phela yingakho ibhange iThala ligcine selintenga ngakwezezimali ngenxa yeningi labantu abagcina bengalibuyiselanga imali ababeyibabolekile. Iningi labo selizihlalela ezindaweni zasemakhaya. Ibhange laliboleke abantu imali ngemali okuthiwa yiRural Homeloan nokuyilapho abanye babefuna ukuthenga, ukuthuthukisa imizi yabo kubanjiswe ngamaPermission To Occupy (PTO) noma ngamatayitela okuqashiselwa ngomhlaba.”
UMnu Buthelezi ugxeke abe-ITB ukuthi bahlongoza udaba lwamatayitela bebengaxhumananga nabantu.
“Sifuna ukwazi ukuthi abe-ITB balwenzile yini ucwaningo ngaphambi kokuthi bathi sekuzofanele abasemakhaya banikezelwe ngamatayitela. Ingakho sithi kumele kuqokwe iKhomishana ezophenya ngalolu daba ukuze kugwemeke ukuchitheka kwegazi. Phela lolu daba lubucayi ukuthi lungaphathwa budlabha.”
UMnu Buthelezi uqhuba uthi: “Iningi lezikhulu ze-ITB lihlala koMhlanga nemindeni yazo yingakho bengenandaba ngokuzokwenzeka kubantu basemakhaya,”
UMnu uReggie Mbatha ohlala eClermont naye uhambe emagameni kaButhelezi egxeka i-ITB ngokudayisa umphakathi ohlala emakhaya. “Phela i-ITB iphosa umphakathi wasemakhaya ogibeni ngala matayitela. Sicela iSILO ukuba sibize ukhukhulela ngoqo wembizo ephuthumayo yesizwe samaZulu ngenhloso yokuzobhunga ngale nhlekelele ebonakala izodaleka ngenxa yamatayitela emakhaya. Phela ngeke sifike sinqobe ubandlululo bese sizocindezelwa nguHulumeni wentando yeningi. Singamane sife sonke; ngeke siyivumele eyamatayitela emakhaya,”
Isikhulu se-ITB, uMnu uSimphiwe Mxakaza walile ukuphawula ngoba ethi akagunyaziwe ukukhuluma nabezindaba. “Ngicela uthinte uMphathi WeHhovisi le-ITB, uDkt uFikisiwe Madlopha. Noma ungithumelele uhlu lwemibuzo,” kusho uMnu Mxakaza.
Imizamo yeBAYEDE yokuthola uDkt uMadlopha eHhovisi lakhe ayiphumelelanga kodwa omunye wozakwabo uthe uDkt uMadlopha usemhlanganweni uyoze atholakale ngoLwesihlanu.
Izinhlaka zonke zoBukhosi okubalwa naMakhosi bayayichitha indaba yokunikezelwa ngamatayitela ezindaweni zasemakhaya. Iningi labo likholelwa ukuthi lokhu kuhloswe ngakho ukuzobulala izinhlaka zoBukhosi kuphinde kunqinde amandla aMakhosi.
Emhlanganweni waMakhosi ne-ITB obuseThekwini ngomhla zingama-27 kuNtulikazi aMakhosi aphakamise ukuba ukudingidwa kwalolu hlelo kumiswe kuze kube kutholakala incazelo eqondile ukuthi luzosebenza kanjani emakhaya nokuthi aMakhosi afuna ukubonana neSILO Samabandla kuqala.
Inhloso yomhlangano, i-ITB ibifuna ukuzochazela aMakhosi ngalesi siphakamiso.
AMakhosi esabela nokuthi udaba lwamatayitela emakhaya ngeke nje lugcine ngokubeka engcupheni umhlaba woBukhosi kodwa futhi lungagcina luguqule nendlela yokuphila ezindaweni ezingaphansi koBukhosi.
“Yingakho nje abamabhange kanye neqembu leDemocratic Alliance sebephumele obala kuqala bethi bayakweseka lokhu okuhlongozwa i-ITB. Phela ingoba bahlose ukuqeda ngezinhlaka zoBukhosi kuphinde kudliwe nezindawo nemizi yabantu emakhaya,” kuqhuba uMbatha.
Iqembu leDemocratic Alliance (DA) kanye nabamabhange basithakasele lesi siphakamiso sokunikezelwa ngamatayitela ezindaweni zasemakhaya.
Umholi weDA eSishayamthetho KwaZulu-Natal, uMhlonishwa uSizwe Mchunu yena uthi lesi siphakamiso samatayitela singukunqoba kubantu basemakhaya asebezoba ngabanikazi bomhlaba.
UMhlonishwa uMchunu uqhube wathi iDA yilona lodwa iqembu lezepolitiki KwaZulu-Natal ebelingobhongoza ekulweleni ukuba abantu basemakhaya abahlala ngaphansi komhlaba ongaphansi kweNgonyama Trust ukuba banikezelwe ngamatayitela.
Iyacija imikhonto ngodaba lwamatayitela
Unyaka we-1968: Ukuvalwa kwesahluko kwaZulu